के साइनाे छ र, डाक्टर केसीसँग !
‘सत्याग्रह’ एक प्रतिकारमात्रै होइन, एक विशिष्ट जीवनपद्धति पनि हो।
भारतमा महात्मा गान्धी र अन्ना हजारेले ‘सत्याग्रही’ कै रुपमा पूरै भारतको प्रतिनिधित्व गरे। यतिबेला युगौं युगका लागि नेपाली सत्याग्रही भनेर चिनिने डा.गोविन्द के.सी अब रामेछापलाई मात्रै नभएर फरक धारबाट आम नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैछन्।
उनी आमनेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने भावनालाई कुनै ‘वाद’ले छेक्न वा धमिल्याउन सक्दैन। वाद र दलीय संगठनको छाँया पनि नपरोस् सत्याग्रहमा।
प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता विपी कोईरालाले भनेका थिए-‘निर्णय गर्न दुविधा भए एक मुट्ठी माटो लिएर निर्णय लिनु।’
संस्थापकलाई नै ‘गद्दार’ भनिएको यो समाजको मनोविज्ञानमा डा. गोविन्द के.सीलाई सत्ताको चस्मा पहिरिएर ‘पागल’ भनिदाँ नागरिक आन्दोलनको उचाइ कम हुनैसक्दैन।
नेपालगन्ज, ०७, कात्तिक । घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने झै नेपालीहरुको सबैभन्दा लामो र महत्वपूर्ण पर्व दशैं घरआगनमा भित्रिसकेको छ...
हड्डीको गुणस्तर कसरी खस्किन्छ ?
नेपालगन्ज ४, कात्तिक । विश्वमा हाल वार्षिक रूपमा ८९ लाख हड्डी भाँचिने कारण अस्टियोपोरोसिस रहेको अध्ययनले देखाएका छन्। हरेक...
नेपालगन्ज, १ कात्तिक । कोभिड–१९ को महामारीले विश्व आतंकीत भइरहेको छ । नेपाल पनि योबाट अछुतो छैन् । पछिल्ला...
कोरोना संक्रमित १५ बर्षीय बालकको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा मृत्यु
कोहलपुर २३, असोज । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहपुरमा उपचारका...